Lammiin Itoophiaa Kokab 'dizaayinara uffannaa filatamtu baha Afriikaa 2017' taa'uun badhaafamte - BBC News Afaan Oromoo
Lammiin Itoophiaa Kokab 'dizaayinara uffannaa filatamtu baha Afriikaa 2017' taa'uun badhaafamte
Sanbata darba Keenyaa keessatti badhaasa faashinii uffataa bara 2017 irratti dorgommi godhameen, lammiim Itiiphiyaa Baha Afrikaatti dizaayinara filatamtuu ta'uun mo'ateetti.
Dorgommii kana ilaalchisee sagaleen ji'ootaaf marsariitii irratti kennamaa turee fi murtii namoota ogummaa kana irratti bobba'anii dabalachuun dorgommiin kun gara xumuraatti akka dhufu ta'eerra.
Haaluma kanaan dorgoommi ''dizaayinaara filatamoo Baha Afrikaa'' qophaa'ee kana lammi Itiyoophiyaa kan taatee fi Naayiroobii kan jiraatu Aadde Kokab Zamed mo'ateetti.
Aadde Kokab xumura dorgommii kana ilaalchisee sagantaa do'ii faashinii dhiheessuun badhaasa qophaa'eef qopheesitoota sagantichaa irra fudhateetti.
Badhaasa kana mo'achuuf aadde Kokab dizaayinaroota biroo shan kan biyyoota Keenyaa, Ruwaandaa fi Taanzaaniyaa irraa kadhimamanii waliin dorogmtee turte.
Kaayyoon badhaasa kanaas, induusitirii kana keessatti ilaalcha haaraa fi kan mataa isaanii ta'e fayyadamuun namoota hojii gurguddaa hojjataniif beekumtii fi ulfina kennu akka ta'e marsariitii qopheesitoota sagantaa kanaa irratti ibsameera.
Ulaagaleen hojiin isaanii ittiin gamagamamee keessaayis, dizaayinii haaraa fi raawwii bareedaa qaban, ilaalchaa dhuunfaa abbichi hojii sanaaf qabuu fi fakkeenyummaa namootaa biroof ta'an kan dabalate ture.
Kokab, ALA bara 2009 keessa Kokii dizaayiin hundeessuun huccuu aadaa Itophiyaa fi Ardi Afriikaa biroo waliin maktee qopheessuun bu'aa dizaayinii isheetiin aadaa uffata Afrikaa walitti firoomsaa jirti.
Uffata Koloonii Ingiliziitiin walqabatee dhufee gara uffata mallattoo bilisummaa ta'etti geedaruun yeroo jalqabaaf uffannaa abbootii seeraa Keenyaaf dizaayiin gochuun kan hodhame Kokii dezaayinariin ture.
Image copyright Adele Dejack
Goodayyaa suuraa Dorgomtoonni Bara 2017 keessa induustrii faashinii kallattii 13 irratti milkaa'an badhafaman
Uffata mana murtii waliigalaa Keenyaa irra darbee biyyoota Afrikaa biroo irraa haalluu addaa addaatiin hojjetamanii huccuu dhufan irraas haala ammayyaan uffata qopheesiti.
Dubartootaa, dhiiraafi ijoolleef akkasumas qophii addaa addaatiif kan oolanis ta'e kan hojii fi ayyaanaaf akka uffatamaniitti faashiinii addaa addaatiin hojetamuun gabaa irra kan oolan qopheesiti.
Huccuu fi kuula wayyaa aadaa Itoophiyaa, huccuu ammayyaa addaa addaa waliin walitti dabaluun faayidaa baay'eef akka oolu goote hojjechaa turteetti.
Hojii kana keessatti kan isheen hordooftus ''uffaata aadaa durii isa ammayyaa ammaa waliin wal-simachiisuun guddisuu malee isa durii hambisanii isa haaraadhaan geedaruu miti'' jetti.